Abiy Axmed oo booqasho kedis ah ku tagay Asmar xilli ay Itoobiya qasantahay.
Saturday July 18, 2020 - 17:32:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Abiy Axmed ayaa socdaal lama filaan ah ku tagay magaalada Asmara ee caasimadda wadanka Eritrea.
Warbaahinta ku hadasha Afka dowladda Xabashida Itoobiya ayaa maanta barqadii baahisay muuqaallo muujinaya Abiy Axmed oo isagoo xiran maaskada looga gaashaanto Carona Virus ka degaya garoonka diyaaradaha Asmara.
Isais Afwerki ayaa R/wasaaraha Itoobiya munaasabad soo dhoweyn ah ugu sameeyay Asmara, lama oga waxa uu salka ku hayo socdaalka Abiy Axmed ee dalka Eritrea.
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa sanadadii lasoo dhaafay waday wax ay ugu yeereen midaynta wadamada bariga Afrika arrinkaas oo dhaliyay shaki laga qabo in labadan dal ay doonayaan sidii ay uboobi lahaayeen kheyraadka dhax ceegaaga Soomaaliya.
Socdaalka Abiy ee Eritrea wuxuu imaanayaa xilli dagaallo iyo rabshado dhiig badan ku daatay ay ka socdaalka dalka Itoobiya, kooxaha mucaaradka qowmiyadda Oromada ayaa horay u sheegay in Xukuumadda Addis Ababa ay maciin bidi doonto adeegsiga ciidamo Ereteriyaan ah si ay udambiso kacdoonka shacbiga ah ee wadankaas gilgilay.
Darawalkii khaaska ahaa ee Shariif Sheekh Axmed oo Meydkiisa laga helay Hoteel Muqdisho kuyaal!
Askar Itoobiyaan ah oo lagu dilay gudaha degmada Luuq.
Video+Warbixin: ITOOBIYA OO KALA DHAQAAQDAY.
Doorashooyin aysan raalli ka aheyn dowladda Itoobiya oo ka bilaawday gobolka Tigray.
Saldhigga ciidamada Itoobiya ee degmada Baardheere oo weerar lakulmay.
Itoobiya oo xaqiijisay in Mareykanku uu ka joojiyay lacag 100 Malyan ah.
Waddooyinka Muqdisho oo loo xiray Deni iyo Axmed Madoobe.